Akụkọ anyi | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » anyị Story
Ryan Salazar, Onye guzobere ya Magazin mgbasa ozi mgbasa ozi
Nkwado nke onye mgbasa ozi mgbasa ozi na-abịa n'ihu Ryan Salazar, Broadcast Beat na-ejide ihe niche nke ndị ọzọ na-ewepụ ma nabata ụlọ ọrụ ọhụrụ na nkà na ụzụ na-emepụta. "E mepụtara Magazine Broadcast Magazine iji nye onye ọ bụla ozi ụlọ ọrụ ahụ ka ọ na-eme," ọnụ ahịa Salazar. "Cheedị echiche, ọtụtụ narị ndị na-ewu ewu na ndị ọrụ mgbasa ozi ọha na eze ... niile nabatara n'otu ebe ịkọrọ ndị ọrụ mgbasa ozi! Na mgbakwunye, Broadcast Beat nwere ndị ọrụ na-ede ederede kwa ụbọchị. Ndị edemede a edepụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ edemede na mbipụta ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ahụ! "
Mmepụta ihe, Nchịkọta ọdịnaya na Ọdịnaya Ntanye - ọ BỤGHỊ KWURU! Ihe di mkpa bu ahia ahia ahia ma mara otu isi iyi maka ihe di mkpa. Ha na-ekwu na ịmara bụ ọkara agha - anyị nwere gị kpuchitere maka ọkara ahụ wee nwee ụfọdụ!
Mgbasa mgbasa ozi ejiriworị dochie akwụkwọ ochie ndị na-ebipụta akụkọ mgbasa ozi na-ebipụta dị ka onye na-ajụ. Ọ bụghị nanị na anyị na-apụ iji nweta ozi ọma - a na-enyefe anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị! Mgbasa mgbasa ozi na-ekpuchi ụlọ ọrụ ọ bụla na-egosi n'ụwa nile na n'ọtụtụ ọnọdụ, na ntaneti vidio site na ụlọ ngosi ihe nkiri.
"Anyị nwere njikọ na ụlọ ọrụ mgbasaozi ọha na eze niile, ndị na-agbasa ozi na ndị na-emepụta ihe, gụnyere ndị otu dịka National Association of Broadcasters (NAB), Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE), National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) na ndị ọzọ, "ka Salazar na-ekwu.
Industrylọ ọrụ ahụchọrọ olu - ma Broadcast Beat nọ ebe ahụ iji nye ya. Wezụga ọdịnaya niile ị na-atụ anya ya site na isi mmalite ndị ị na-adabere ugbu a ma ọ bụ n'oge gara aga, ndị na-agụ akwụkwọ na-enwe obi ụtọ ịhụ nnukwu ihe ndị sitere na teknụzụ ruo n'okpukpu niile na ebe niile n'etiti. Broadcast Beat na-elele ọhụụ na teknụzụ na-apụta ma na-ewetara ya n ’ụzọ si ele anya na-amasị ma ndị ọrụ ma ndị nọ n’èzí.
Iche echiche banyere ọrụ mgbanwe n'ime mgbasa ozi? Broadcast Beat nwere ndepụta nke Hot Ọrụ nke ga-ọ bụghị naanị na-enweta gị anya ma nwere ike itinye gị na "ndị na-agbagha agbagha" ụdị na-amụba gị ego! Chọta ọrụ zuru oke nke ga - adabaghị gị ma bụrụ ezigbo egwuregwu maka ọrụ ọhụrụ gị! Ụgbọ okporo ígwè iji mụbaa ma ihe omuma gị na isi ihe omuma ma ego gị! Ọrụ ahụ dị n'ebe ahụ - BỤ ugbu a maka mgbanwe ka mma!
Ọ bụ ezie na okwu ahụ bụ "Ígwé ojii" pụtara, ọ dịkwa ngwa ngwa iji ya na mgbasa ozi mgbasa ozi, ọdịnihu nke ọdịnaya mgbasaozi na imezu ọchịchọ dị na ngwaọrụ mkpanaka na kọmputa na-adabere na Ígwé ojii iji nye onye na-azụ ihe n'oge a ihe ha chọrọ ya niile - ọdịnaya mgbe na ebe ọ ga-adịrị ha mfe ile ya anya. Ọbụna m bụ akụkụ nke nnukwu nzukọ metụtara Cloud - ịmara nke Broadcast Beat ga-enyere mgbasa.
Ọtụtụ mpaghara, ọtụtụ ihe ga - ekpuchi - mana Mgbasa ozi ntanetị ga-adị n'ebe ahụ iji jide n'aka na ị nọ ebe ahụ! Akụkọ ọ bụla ga-enyere gị aka ịgụta ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-agbanwe mgbe niile site na obere mgbanwe na mgbanwe ndị dị mkpa! Ndị na-ede akwụkwọ maara nke ọma na-eme ka ị mara nke ọma dịka onye kwesịrị ịnọ n'ahịa mgbasa ozi! Enwere otutu ọrụ iji mee - ya mere ugbu a, tinye ihe ọmụma gị ugbu a ma nọrọ na ntanetị!